यसपाली यस बिरालोले गर्नेछ विश्वकपको भविष्यवाणी, कसरी? - Jhapa Online
यसपाली यस बिरालोले गर्नेछ विश्वकपको भविष्यवाणी, कसरी?
June 11, 2018 7:31 am
आगामी बिहीबारबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप नजिकिँदै गर्दा मानिसहरुले को जित्ला भनेर आ–आफ्ना भविष्यवाणीहरु गर्न थालिसकेका छन्।
विश्वकपमा सुरुवातमा ४८ समूहका खेलहरु हुनेछन्। उनीहरुबाट दोस्रोचरणका लागि छनोट भएका १६ हुदै ८ टोलीले क्वार्टरफाइनल खेल्नेछन्। त्यसपछि सेमिफाइनल र अनि फाइनलको टुंगो एकमहिनापछि जुलाई १५ मा लाग्नेछ।
नेमारसहित तीन खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण
स्विजरल्याण्डको सानदार जीत